नागरिक एप : अब सरकारी सेवा हातहातमै, कागजात बोक्ने र लाइन बस्ने झन्झट अन्त्य
ठूलो नितम्ब भएकै कारण करौडौं कमाउने एन्ड्रिया (फोटोफिचर)
नेता भण्डारीको खुलासा : नक्साकै कारण प्रचण्ड-माधवले ओली फाल्न लागेका हुन्
सेफको ८०० करोडको घरमा वेब सीरीज ताण्डवको सुटिङ, कस्तो छ महल ?
आत्मा फर्काउँछु भन्दै २० दिनसम्म लास घरमै राखेपछि…
श्रीमतीले माइत जाने जित गरेपछि श्रीमानले स्तन काटिदिए..
रिलमा निकै रमाइलो जस्तो देखिन्छन् कलाकारको जीवन । सुन्दर पोशाक, मन्द मुस्कानले पनि रिलको रमाइलो कि’स्सा । तर रिलमा निकै रोचक देखिने कलाकारले रियल लाइफ भने सोचे जस्तो हुदैन ।
तीनसय बढी म्यूजिक भिडियोमा काम गरेकी सुष्मा अधिकारी गोदावरीको घ-टना कहिल्यै बिर्सन्नन् ।पुसको महिना, गोदावरी लोकेसन । निर्देशक थिए शिब बिक । पानीमा भिजेर अभिनय गर्नुपर्ने ।
निर्देशकले पहिल्यै भिजेर अभिनय गर्नुपर्छ भनेकाले तयार भएर बसेकि थिइन् । सुटिङ सुरु भयो । ट्याङ्करले पानीको फोहोरा दिन थाल्यो ।
निर्देशकको एक्सन संगै सुष्मा पानीको फोहोरामै नाच्न थालिन् । मोडल नयाँ थिए । पटक पटक टेक खाए । सहकर्मी मोडलले धेरै टेक खाँदा साँझसम्म पानीमा भिजेरै बि’त्यो ।
अब त सुटिङ सकियो भनेर खुसी हुँदै घर आएकी सुष्मालाई घर पुग्दा नपुग्दै हनहनी ज्व-रो आइसकेको थियो । सुष्मा भन्छिन् ‘चिसो पानीमा भिज्दाको असरले एक हप्तासम्म औष-धी खाएर सुत्नु पर्‍यो ।’
म्यूजिक भिडियोको तुलनामा उनको फिल्म थोरै छ । फिचर फिल्मको तुलनामा म्यूजिक भिडियोको काम छिटो हुने र पारिश्रमिक पनि राम्रो पाइने भएकाले भिडियोमै फोकस भएको उनको भनाई छ ।
तस्वीरकै कारण सुष्मा अधिकारीको चर्चा चुलिएको हो । विभिन्न म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी सुष्मा स्टेज कार्यक्रममा पनि उत्तिकै सक्रिय रहन्छिन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेशबुक र इन्स्टाग्राममा सार्वजनिक गरेका केही तस्वीर यस्ता छन्–
मोडल सुष्मा अधिकारीको वाल्यकालको सम्झना उनकै शब्दमाः
सानोमा सार्‍है सोझी र लजालु थिएँ । साथी पनि निकै थोरै थिए । स्कुल पढ्दा त मेरा तीनजना मात्रै साथी थिए । म स्कुलमा औसत विद्यार्थी थिएँ । फस्ट, सेकेण्ड कहिल्यै भइनँ । बाबाले परिक्षाको बेला स्कुलबाट आउनेबित्तिकै पेपर मागेर कस्तो लेख्यौ भनेर सोधिहाल्नु हुन्थ्यो, मलाई दिक्क लाग्थ्यो ।
स्मृती भन्ने निकै मिल्ने साथी थिई । तर, पाँच कक्षामा पढ्दा मज्जैको झगडा पर्‍यो । पाँच दिनसम्म बोलिनँ । म बस्ने बेञ्चमा चुइगम टाँसिदिइछ । मेरो स्कटमा चुइगम लागेपछि म नराम्रोसँग रिसाएको थिएँ । अहिले चाँही उ मेरो निकै मिल्ने साथी हो ।
मलाई बाबाले एकपटक मात्रै पि ट्नु भएको छ । त्यो पनि स्कुल बंक गरेको कारण । मेरो साथीको बाबा-ममी हुनुहुन्थेन । साथीले आज नयाँ फिल्म लाग्छ, हेर्न जाउँ भनी । हामी दुई पिरियड छोडेर फिल्म हेर्न गयौं । हामीले स्कुल छाडेर फिल्म हेर्न गएको पछि थाहा भएछ ।
स्कुलमा चेतराज भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो । उहाँको सारै डर लाग्थ्यो । उहाँको नाम सुन्नेबित्तिकै हाम्रो सातो जान्थ्यो । मेरा केही साथीहरु निकै चकचके थिए । उनीहरुले चकचक गरेवापत मैले थुप्रैपटक पिटाई खाएकी छु ।
स्कुल जान घरबाट १५ मिनेट जति लाग्थ्यो । कहिले बाबासँग जान्थेँ त कहिले दादासँग । ५/६ कक्षापछि चाहीँ म आफैं साइकल लिएर जान थालेँ ।
कति साथीहरुले घरमा खाना बनाएको कुरा गर्थे । एकपटक मैले पनि सरप्राइज दिन पर्‍यो भनेर आफ्नै सुरले खाना बसाएँ । तर, सबै डढेछ । पछि ममीको गाली खाएँ ।
म स्कुलमा पेन्सिल खुब हराउथेँ । तर, घरमा आएर भन्दिनथेँ । एउटा बट्टामा पेन्सिल राख्दिनुहुन्थ्यो, खुसुक्क झिकेर झोलामा राख्थेँ ।
स्कुल जाँदा चिटिक्क परेर जाने बानी थियो । सानोमा ममीले आइरन गर्दिनुहुन्थ्यो । पछि आफैंले गर्न थालेँ ।
मलाई सानोमा पाइन्ट मन पथ्र्यो । पिंक कलर मलाई मन पर्ने रंग थियो । नयाँ लुगा चाँहि प्राय दसैमा किन्दिनुहुन्थ्यो ।
हाम्रो परिवार शाकाहारी भएकाले घरमा माछा मासु पाक्दैन थियो । म फुपुको घरमा गएर मासु खान्थेँ । मलाई थुक्पा खुब मन पथ्र्यो । हामी साथी-साथी मिलेर थुक्पा खाना जान्थ्यौं ।
स्कुल पढ्दाका आठ-नौ जना जति साथी अहिले सम्पर्कमा छन् । हप्तामा एकपटक जसो फेसबुकमा कुरा हुन्छ ।
सानोमा एकपटक दुर्घ टना भएको छ । मलाई साइकल चढ्न खुब रहर लाग्ने, तर घरमा दिनुहुन्नथ्यो । एक दिन घरमै थिएँ । सरु दिदी भन्ने हुनुहुन्थ्यो । उहाँ आउनुभो र घुम्न जाउँ भन्नु भो । साइकलको पछाडि बसेँ । सरु दिदीले साइकल चलाइरहँदा मेरो खुट्टा त पांग्राभित्र छिरेछ । घाइते नै भएँ । १५ दिन जति रेस्ट गर्नु पर्‍यो । त्यो वेलामा लागेको चोटको निशाना खुट्टामा अझै बाँकी छ ।
म सानैदेखि स्कुलमा हुने कार्यक्रममा डान्स गर्थेँ । ठुलो भएपछि के हुने मैले केही सोचेको थिइनँ तर, साथीहरुले हिरोइन हुन्छेस भन्थे । म जन्मेको धनगढी । हाम्रो गाउँमा थुप्रै कार्यक्रम हुन्थ्यो तर, त्यति धेरै त्यस्ता कार्यक्रममा जान्नथेँ ।
मैले स्कुल पढ्दा राजेश हमाल र दिलिप रायमाझीको नाम सुनेको थिएँ तर, भेट भएको थिएन ।
आर्यनको अभिनयवाट प्रभावित
आर्यन सिग्देलको अभिनयवाट प्रभावित सुष्मालाई आर्यनसँग काम गर्ने मन छ । तर, अहिलेसम्म अवसर जुरेको छैन । कुनै दिन आर्यनको जोडी बन्न पाइएला भन्नेमा उनी आसावादी छिन् ‘कुनै दिन काम गर्ने साइत आउँछ होला ।’ सुष्माले भनिन् ।
आर्यनको फिल्म हेर्नु अघि नै उनको फ्यान बनेकी सुष्माले कुमारी हलमा गएर पहिलो पटक आर्यन अभिनित ‘किस्मत’ हेरेको थिइन् । त्यसपछि कुनै पनि फिल्म छुटाएकी छैनन् ।
सुष्मा भन्छिन् ‘उहाँको प्राय सबै फिल्म हेर्ने गरेकी छु ।’ उनका अरु पनि साथीहरु छन आर्यनका फ्यान । ‘हामी साथी साथी (फ्यानहरु) जम्मा भएर हलमै गएर फिल्म हेर्ने गरेका छौं ।’ उनले भनिन् ।
जम्मा चार पटक भेट भएको रहेछ उनको आर्यनसँग । पत्येक भेट हाई हल्लोमै बित्यो । ‘म मनमा लागेको कुरा फ्याट्ट भन्नै सक्दिन ।’ सुष्माले भनिन् । त्यसकारण सुष्मा आफ्नो कट्टर फ्यान हो भन्ने कुरा आर्यनलाई अहिलेसम्म थाहा छैन ।
स्कुल लेभलदेखि नै नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा भविष्य बनाउँछु भन्ने दृढ संकल्प बोकेकी सुष्माको सपना उच्च शिक्षाका लागि काठमाण्डौँ आउने क्रममा पुरा भयो ।
सानैदेखी नृत्यमा सिपालु उनी टिभीमा नाटक, चलचित्र हेर्ने क्रममा आफु पनि अभिनन गर्न सिक्ने गर्थिन् । एसएलसी दिएपछिको विदाका बेला एउटा म्युजिक भिडियोमा खेलेर नेपाली रंगमञ्चमा प्रबेश गरेकी सुष्माले यो नौं वर्षको अन्तरालमा निकै ठुलो उचाई बनाउन सफल भईसकेकी छिन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शुक्रबार, पुस १७, २०७७ १४:१६:२१
कपिल शर्माको फ्यानहरुको लागि अत्यन्तै दुखद खबर !
भारतलाई नेपालको बोस नठान्न प्रधानमन्त्री ओलीको मोदीलाई सन्देश
सिद्धार्थ कटेजमा मिना ढकालसँग २ घण्टा !
साताको पहिलो दिन सुनको मुल्य ह्वात्तै घट्यो
ग्रहको सेनापति मंगल,मेष राशिमा प्रवेश गर्दा यी ७ राशि मालामाल !
विप्लव समूहले सार्वजनिक गर्‍यो नेपाल बन्दसहितका कार्यक्रम
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अमेरिका बस्ने नेपाली युवतीसँग विवाह गर्दै ?
विवाहको डेढ महिना पछि श्वेताले दिइन् भव्य रिसेप्सन पार्टी
भाटभटेनीमा १० प्रतिशत छुटको स्कीम अब केही दिन मात्रै
माघ महिनामा दुर्लभ खगोलीय घटना देखा पर्दै, राजनितीमा अर्को खड्गो
फ्यानबाट घेरिए राजेन्द्र खड्गी, मौलिक बाजागाजासहित भयो यस्तो रमाइलो
कमल खत्रीको ‘आफ्नै मान्छे’ रोश्नी ! एकअर्काको तारिफ गरेर थाकेनन् (हेर्नुस् भिडियो)
पून्य गौतमको वीचमा बसेर पोखराका भाइरल आमा छोरीको कडा दोहोरी ब्याटल (हेर्नुस् भिडियोमा)
दुखीको सेवा गरेर चर्चामा आएका सोनुलाई पर्यो यस्तो बज्रपात
कार्यक्रममा सम्बाेधन गर्न गएकी बिना मगर आफ्नै गृहजिल्लामा लखेटिइन् !
आफ्नो खातामा भएको पैसा आमाको नाममा पठाएर लण्डनमा नै अस्ताए बद्री
काठमाडौंको कुलेश्वर केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्पको धक्का